Hoos u dhigista agabka codbixinta ee cusub ee laga heli karo Minnesota - Meals on Wheels
Hoosudhaca kheyraadka codbixinta cusub ee laga heli karo Minnesota
Maalinta doorashadu ma ahan ilaa Nofeembar 4, laakiin codbixinta ayaa horayba uga furan Minnesota. Sannadka ugu horeeya, reer Minnesota waxaa loo oggol yahay inay codeeyaan maqnaanshaha cudurdaar la'aan cudur-daarna horay ayaa loo heli karaa kuwa xiiseynaya doorashadan.
Codbixinta maqnaashaha waxay fursad weyn u noqon kartaa waayeelka iyo dadka naafada ah ee la soo dersa dhibaatooyin la xiriira imaatinka doorashooyinka Maalinta Doorashada. Taasi waa sababta barnaamijyada Meals on Wheels ee maxalliga ahi ay gacan uga geysanayaan sameynta macluumaadka ku saabsan diiwaangelinta codbixinta iyo maqnaanshaha codeynta inay heli karaan qaatayaasha iyo daryeelayaashooda.
Haddii aad qorsheyneyso inaad codeyso maqane, waa inaad ka diiwaan gashan tahay inaad ka codeyso cinwaankaaga hadda. Haddii aadan hubin inaad diiwaangashan tahay, waad awoodaa hubi heerka diiwaangelintaada khadka tooska ah
Sannadkan sidoo kale waa sanadka koowaad ee aad awoodid isdiiwaangeli si aad uga codeyso khadka tooska ah ee gobolka Minnesota. Si aad horay isugu diiwaan geliso khadka tooska ah, waa inaad ku dhammaystirtaa arjigaaga 11:59 pm Talaadada, Oktoobar 14. Waxaad sidoo kale ku diiwaan gelin kartaa boostada (codsiyada boostada waa in la helaa ugu dambayn 5 galabnimo Talaadada, Oktoobar 14), qof ahaan iyo goobta codbixintaada dhig maalinta Doorashada. Macluumaad dheeraad ah oo diiwaangelin ah ayaa laga heli karaa Bogga Xoghayaha Dawladda ama adiga oo waca 877-600-8683.
Maqnaanshaha waxaad ku codeyn kartaa boostada ama shaqsi ahaan illaa Maalinta Doorashada. Haddii lagu codeeyo boostada, waraaqaha cod-bixinta waa in la helaa Maalinta Doorashada si loo tiriyo.
Si aad ugu codeyso boostada, waxaad soo gudbin kartaa a codsi codbixinta khadka tooska ah ama soo degso codsi warqadda cod-bixinta ah, daabac oo boosta ku soo dir. Markii aad hesho codbixintaada, raac tilmaamaha si taxaddar leh. Xafiiska Xoghayaha Arimaha Dibadda wuxuu kaloo bixiyaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan codeynta maqnaanshaha boostada.
Si aad shaqsi ahaan ugu codeyso maqnaanshaha, waxaad booqan kartaa xafiiskaaga doorashada ee degmada inta lagu jiro saacadaha caadiga ah ee xafiisyada ee doorashada horteeda, iyo sidoo kale qaar xarumaha dowladda ee magaalada. Ka raadi macluumaad dheeri ah maqnaanshaha codeynta shaqsi ahaan halkan.
Haddii aad qabtid su'aalo la xiriira codbixinta ama maqnaanshaha codbixinta, waxaad wici kartaa Xafiiska Xoghayaha Gobolka ee Minnesota lambarka 877-600-8683. Haddii aad ogtahay qof qaata Meals on Wheels oo adeegsan kara caawinta codeynta, waad nala soo xiriiri kartaa 612-623-3363.
Oktoobar 10, 2014